Nin soomaalida Denmark ah oo ku biiray kooxda Daacish oo dhalashadii lagala noqday | Somaliska
Maxkamadda sare ee dalka Denmark, ayaa go’aan ku gaartay in dhalashadda ay kala laabto nin soomaali ah oo heeysta dhalashada dalkaasi, ka dib markii uu ku biiray kooxda Daacish.
Ninkan soomaaliga ayyey maxkamadu sheegtay inuu ka soo qeyb qaatay dagaalka kooxdani ka wado dalkaasi Suuriya. Ninkan oo 27 jir ah ayaa sanadkii hore waxaa maxkamad ku xukuntay toddobbo sanno oo xarig ah.
Xukunka ninkaasi lugu riday ayaa wararka aanu ka heleeyno Denmark sheegayaan in horaantii sanadkan uu racfaan ka qaatay, taana ay dhalisay in laga qafiifiyo ciqaabta.
Dhinaca kale muwaadin isagana asalkiisa yahay dalka Turkiga ayaa lagala noqday dhalashada Denmark, markii isagana uu ku biiray kooxdaasi. Sidoo kalena sanadkii 2103-kii uu labbo xilli u dhoofay Suuriya kuna soo qaatay tababaro xeryaha kooxdani ay leedahay oo lugu barto sida loo adeegsado hubka iyo qoryaha.
Ugu dambeyntii ninkan Trkiga ah iyo soomaaliga ayaa markeey dhameeystaan xabsiga waxaa laga musaafurin doonaan dalkaasi iyagoona aaneey dib dambe ugu soo laaban doonin. Soomaalida ku dhaqan dalalka Yurub gaar ahaan Galbeedka ayaa tan iyo markii ay soo shaac baxday kooxdan argagagxisada ahi waxaa ay u hayaameen dalalka Suuriya iyo Ciraaq oo ay kooxahani ka ariminayeen iyagoo jihaad doon been ah halkaasi ka doontay. Qaarkood ayaa ku dhintay dagaalka kooxahaasi lugula jiro.
November 14, 2017 at 17:55
Qoraalkaan aadbuu isugu dhex yaacsanya , mana tifaf-tirna !!
Dabcan meelo badanoo u baahan hakad (,) ama Joogsi (.) midna malahan .
Marka qoraalkaan dib haloo saxo MAHADSANIDIIN .
Fad ama hadfadin waalagu fadsiin